Quique Setién oo ka hadlayay wararka sheegaya in Lionel Messi uu dhaawac qabo – Gool FM
Dajiye February 23, 2020
(Barcelona) 23 Feb 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Quique Setién ayaa sheegay in Lionel Messi uusan qabin wax dhaawac ah, isagoo dhinaca kale tilmaamay in Lio uu ciyaaray kubadda cagta sanado badan, isla markaana uu ka war qabo waxa uu sameynayo.
Waxaa jiray warbixino dhowr ah ee tilmaamayay in Lionel Messi uu qabo dhaawac muruqa ah mudooyinkii ugu dambeeyay, balse tababare Quique Setién ayaa arrintaas beeniyay.
Barcelona ayaa garoonkeeda Camp Nou guul kaga gaartay kooxda Eibar, kaddib markii ay kaga adkaatay 5-0, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada horyaalka La Liga ee dalka Spain, xilli Lionel Messi uu dhaliyay afar gool kulankan.
Haddaba Quique Setién ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday kaddib ciyaarta wuxuu ku sheegay:
“Messi sanado badan ayuu tartamayay, jirkiisana si fiican ayuu u yaqaanaa, wuu garanayaa wuxuu sameyn karo iyo waxa uusan sameyn Karin, ka qeyb galkiisa kulamada si wanaagsan ayaa loo maareeyay, xaqiiqdii qatar gelin mayno”.
“Messi wuxuu u go’aamiyaa kulamada si xariifnimo leh, tani waa waxa aan inta badan dhihi karo, waxa ugu muhiimsan ayaa ah waxa uu isaga arko… waxaan kuu xaqiijin karaa inaan si fiican isaga u daryeelno, xitaa haddii uu doonayo inuu nasto wuu codsan karaa”.
“Messi waa ciyaaryahan cajiib ah, wuxuu sidoo kale gacan ka geystaa dhisida weerarka maxaa yeelay had iyo jeer wuxuu eegaa xulashooyinka isaga ka horeeya, aad ayaan u faraxsanahy sababtoo ah waxaan helnay saddex dhibcood oo aad muhiim u ah”.